Archive du 20200406
Coronavirus Pastera FJKM ireo olona 2 sitrana voalohany
Sitrana ireo pasiteran'ny FJKM mpivady Pasitera Johary sy Pasitera Riana izay samy nitondra ny tsimok'aretina Coronavirus rehefa avy namita iraka tany ivelany.
Firaisan-kina Sino-Malagasy Nanolotra vola sy fitaovana ho an’ny CHU Anosiala
Ny ady amin` ny COVID-19 no mbola ahamehana eto amin` ny firenena.
Guy Rivo Randrianarisoa “ Mora fantarina ny tena meloka…”
Fantatro ary tena fantatro tsara i Arphine Helisoa eo amin'ny sehatr’asa fanaovan-gazety, hoy ny solombavambahoakan’i Madagasikara teo aloha, Guy Rivo Randrianarisoa.
Savorovoro teny Antaniavo Mpivarotra paoma efa nisotrosotro no fototry ny olana
Nitondra fanazavana mikasika ilay savorovoro nitranga teny Antaniavo ny sabotsy teo ny pôlisim-pirenena.
Raha misy ny lesona iray tena lehibe tokony ho tsoahan’ny tsirairay, amin’izao fandalovan’ny Coronavirus izao na olom-pirenena io na mpitondra fanjakana dia ny fandaminana.
Tsy fianarana noho ny fihibohana Maro ireo sekoly nanome enti-mody
Raha ny voalazan` ny tetiandrom-piampianarana dia ny zoma 03 aprily lasa teo no tokony hiditra tamin` ny vakansin` ny paska ireo mpianatra.
Vaky trano Tratra teo am-pitaterana entana ilay lehilahy
Lehilahy iray no voasambotry ny Polisim-pirenena avy ao amin'ny Commissariat Central ao Fianarantsoa ny alahady teo tao amin'ny fokontanin'Anjoma noho ny resaka vakitrano.
Andilanatoby, Andilamena Mpimasy gaigilahy 3 maty voatifitry ny zandary
Lavon’ny bala teo am-pandosirana tao Andilanatoby distrikan’Ambatondrazaka ireo mpimasy raindahiny malaza ratsy tao Andilamena miisa telo raha andeha
Ambohimanarina 14 lahy nosamborina
Lehilahy miisa 14 no voatery nosamborina teny Ambohimanarina ny faran’ny herinandro teo noho ny resaka tsy fanarahan-dalàna.
TOAMASINA Nitokona indray ireo mpitondra tuk tuk
Nitokona fanindroany nidina an-dalam-be indray ireo mpitondra “tuk tuk” miisa 1911 ao Toamasina ny sabotsy teo.
Manakaiky ny 80 000 ny maty Maherin’ny 1 237 420 ny olona voa maneran-tany, ary tafiakatra 67 260 ny maty, raha toa ka 252 944 no efa sitrana.
Taxi-be 133 Itaosy Saofera sy resevera 100 amin’ny 600 no nahazo fanampiana…
Tena mihisatra ny fizarana ny fanampiana ho an’ireo mpamily taxi sy taxibe ary ireo mpanampy azy tonga milahatra isan’andro etsy amin’ny lapan’ny tanànan’Analakely.
Ady amin’ny Covid-19 Manao tohivakana ny tohana sy fanomezana
Ao anatin’ny fotoan-tsarotra no ahitana ny tena namana na tena havana. Manao tohivakana ny fanolorana fanampiana sy fanomezana eny amin’ny ivon-toerana fibaikoana sy fandraharahana ny ady atao amin’ny Covid-19 eny Ivato,
Ady amin’ny Coronavirus Ho hentitra ny fanaraha-maso
Nohenjanina ny fepetra amin’ireo faritra ahitana olona voan’ny Coronavirus dia Analamanga, Matsiatra ambony ary atsinanana.
Krizy ara-pahasalamana Mitaky ny mangarahara ny PFNOSCM/VOIFIRAISANA
Nanao fanambarana ny vondron` ireo firaisamonim-pirenena eto Madagasikara PFNOSCM/VOIFIRAISANA manoloana ny ady amin` ny « coronavirus ».
Mponin’Antananarivo Maro no minia manao be marenina
Isotry, Anosibe, Andravoahangy, Analakely, 67 Ha, Mahamasina… fokontany maro no ahitàna olona mitangorona rehefa maraina ka nampitaraina ireo tompon’andraikitra misahana ny ady amin` ny COVID-19. Ankehitriny,